सेक्सको समयमा कोरोनाबाट कसरी बच्ने ? वैज्ञानिकले दिए यस्ता सुझाव | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सेक्सको समयमा कोरोनाबाट कसरी बच्ने ? वैज्ञानिकले दिए यस्ता सुझाव
जेठ २७ गते, २०७७ - १९:४९
काठमाडौं । लकडाउनका कारण विश्वभरका मानिसहरू आराम गरिरहेका छन् । तर कोरोना भाइरस खतरा अझै छ ।
यस्तो अवस्थामा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले दम्पतीहरूका लागि विशेष सल्लाह दिएका छन्, जसले गर्दा उनीहरू यौन सम्बन्धमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सक्दछन् ।
एक अध्ययन पछि उनीहरूले यो पनि सुझाव दिएका छन् कि कोरोनाबाट बच्नको लागि दम्पतीहरूले यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन । किनकि सेक्सले केही हदसम्म कोरोना संक्रमण फैलाउने जोखिमलाई पनि उजागर गरेको छ । यसैबीच, हार्वर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् कि यौन जोडीले चुम्बन गर्नुहुँदैन र मास्क लगाउनुपर्छ ।
दम्पतीलाई पनि सेक्सपछि नुहाउने सल्लाह दिइन्छ । उनीहरूले भनेका छन् कि घर बाहिरका व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध कोरोना संक्रमणको लागि उच्च जोखिमको वर्गमा पर्दछ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो अध्ययनमा यो स्वीकार गरेका छन् कि मानिसहरूलाई यौनबाट पूर्णरुपले दूर हुन सम्भव छैन, त्यसैले उनीहरूले सावधानी अपनाउनु पर्छ । यो अध्ययन आन्तरिक मेडिसिनको अन्नाल्समा प्रकाशित भएको छ ।
अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता ज्याक टर्बनले भने कि गर्भ निरोधकको प्रयोगको साथमा मास्क पनि लगाउनुपर्छ । केही समय पहिले, थाईल्याण्डका चिकित्सा विज्ञ वीरवत मानुसूठीले सल्लाह दिएका थिए कि कोरोनाबाट निको भएपछि ३० दिनसम्म यौन सम्पर्कबाट टाढा बस्नुपर्छ ।
जेठ २७ गते, २०७७ - १९:४९ मा प्रकाशित